> Resource> Naghachi> Olee naghachi Photos si Canon EOS Rebel T3i
Enwere m ike Naghachi ehichapụ Photos si Canon EOS Rebel T3i?
Ezigbo nchịkọta akụkọ, m nwere nsogbu na m Canon EOS Rebel T3i. M echekwara foto nke m na-eme njem Africa na ya. Ụnyaahụ m ezighị formatted ya na-enweghị okodorode niile foto kọmputa m. Ugbu a foto na-niile na-arahụ. Dị ụzọ ọ bụla na m nwere ike gbapụta m foto?
Foto ndị dị na gị Canon EOS Rebel T3I nwere ike furu efu n'ihi dị iche iche ihe, dị ka kpachaara anya ma ọ bụ na mberede nhichapụ, kaadị ebe nchekwa formatting ma ọ bụ ọbụna usoro nsogbu. Echegbula onwe gị, Ohere nke na-agbake foto site na Canon EOS Rebel T3i dị ukwuu. The furu efu foto ndị ka na kaadị ebe nchekwa gị Canon EOS Rebel T3i tupu ọhụrụ data na-edochi ha. Ya mere, ị dị nnọọ mkpa ịkwụsị iji gị dijitalụ igwefoto na-achọ a Canon EOS Rebel T3i foto mgbake omume na-enyere gị aka.
Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac bụ usoro ihe omume na ị chọrọ iji weghachite foto site na Canon EOS Rebel T3i. Ngwá ọrụ a na-enyere gị iji naghachi ehichapụ na rụrụ arụ foto site na Canon EOS Rebel T3i ole na ole dị mfe clicks.It bụ ike naghachi vidiyo na ọdịyo faịlụ site na gị Canon EOE Rebel T3i igwefoto kwa.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke usoro ihe omume si n'okpuru.
Naghachi Photos si Canon EOS Rebel T3i na 3 Nzọụkwụ
Ka ịrụ Canon EOS Rebel T3i foto mgbake na Wondershare Photo Recovery maka Windows. Mac ọrụ biko na-Mac version ime mgbake.
Nzọụkwụ 1 Run Wondershare Photo Recovery na kọmputa gị, ị dị nnọọ mkpa pịa "Malite" button ke akpan window na-amalite.
Nzọụkwụ 2 Ugbu a, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ mbanye akwụkwọ ozi nke kaadị ebe nchekwa gị Canon EOS Rebel T3i na pịa "iṅomi" anya n'ihi na furu efu photos.
Ị nwere ike hazie faịlụ formats ị chọrọ iji naghachi site na ịpị "iyo Option" ke window.
Cheta na: biko jikọọ gị Canon EOS Rebel T3i ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa na kọmputa gị ma hụ na o nwere ike ghọtara dị ka a ike mbanye na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 Mgbe iṅomi a mere, ị nwere ike weghachite foto site na Canon EOS Rebel T3i ugbu a.
The recoverable photos niile ga-depụtara na omume window. Ịnwere ike ihuchalu ha ka ha ego otú ọtụtụ gị furu efu foto ike-natara. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ ihe oyiyi ị na-aga iji weghachite na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha na kọmputa gị.